Konkolaachisaan namoota akka cirachaatti gargalche - BBC News Afaan Oromoo
Naannoo Amaaraa godina gondar Kibbaa, Aanaa Fogaraa jedhamutti konkolaachisaan siinoo tiraak jedhamu tokko namoota waaqefannaa amantaatii gara qe'eesaanii deebii'aa jiran fe'uun akka cirracaatti goodaatti dhangalaasee tokko to'annaa jala olfamu Ejansiin midiyaa naannichaa gabaase. barame.
Gochi kunis namoonni akka cirrachaatti goodaatti yoo gargalfaman ajaa'ibas, dinqiis jedhameera.
Ejansichis waajjira poolisii aanichaatti itti gaafatamaa eeruun akka barreesseetti, konkolaatichi namoota 30 -40 ta'an erga fee'een booda waan kanfaltii irratti waliin hingaliin namoota fee'ee ture akka cirrachaatti garagalchuun miidhaa qaqabsiiseera.
Getaasaw Yamaata namoota kabaja ayyaanichaa irratti kanneen hirmaatan keessa tokko yoo ta'u, haalicha akkasiin BBC'tti himeera.
Akkuma yeroo biraa barameetti tarii waan bataskaana sanaaf waada galan guuttachuuf kanneen namoota kabaja ayyaanaatiif deemaniif geejjiba bilisaa yoo kennan baayee gaariidha. Yoo ta'u baate ammoo namoonni walta'uun konkolaataa gara ayyaanichaa isaan geessu kireefatu. Kunis yoo ta'u baate ammoo miilaa deemu jedheera.
''Gara bakka sanaa deemuuf konkolaataan idilee hinturre,'' kan jedhu Geetaasawu tilmaamaan fageenyi miilaan sa'aatii shan kan fidhatu kanas ayyaanicha irratti kan hirmaate yoo deemu konkolaata bilisaa Warrataa irraa argachuun akka ta'e dubbata.
Gara manaa deebii'uuf ammoo namoota biraa waliin ta'uun konkolaataa Sinoo tiraak yaabbattu. Imaltoota keessattis dubartootiifi daa'imman ni argamu turan.
Innis haala kana waajjira poolisii aanichaatiif gabaasuu kan hime yoo ta'u, waajjirichis kunoo konkolaachisaa to'annoo jala olchuun iyyata namoota kanaatiif deebii kennu ibseera. Kun ajaa'iba miti?
Talaalliin Covid-19 jalqabaa miliyoona 2.2 Itoophiyaa seene
'Nuti mootummaadha, waan ati hojjechaa jirtu beekna'
Dubartii Itoophiyaa guddifachaan fudhatamtee badhaasaaf geesse-Maskaram Mees
'Rakkoo dheessanii filannoo keessaa ba'uun furmaata miti'- Paartii Badhaadhinaa